.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Video to Mp3 Converter for Android
Android ဖုန်းတွေမှာ Video တွေကို Mp3 ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Converter လေးက အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။
Audio Bitrate ကိုလည်း 64kbps, 128kbps, 256kbps ကိုယ်ကြိုက်တာနဲ့ ပြောင်းလို့ရတယ်။ Android ဖုန်းတွေနဲ့
အင်တာနက်သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သီချင်းတွေကို ရှာဒေါင်းမယ်ဆိုရင် YouTube ဆိုဒ်မှာကတော့
အစုံဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ Mp3 ဖော်မက်နဲ့ တစ်ခါတည်း ဒေါင်းတာက ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးနေတာများတယ်။ ကိုယ့်လိုင်းကမကောင်း
သီချင်းတွေလည်း များများဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင် TubeMate YouTube Downloader လို Downloader App တွေနဲ့
176x144(3GP) ဆိုဒ် Video ကိုရွေးဒေါင်းပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်တော်တော်သေးတယ်။ ပြီးမှ ဒီ Converter လေးနဲ့ Mp3 ပြန်ပြီး
ပြောင်းယူလိုက်ရင် အဆင်ပြေပြီ။ ဒီ Video to Mp3 Converter လေးက Video ဖော်မက်အားလုံးကို Mp3 ဖြစ်အောင်
Audio Bitrate မျိုးစုံနဲ့ အလွယ်တကူ ပြောင်းယူလို့ရပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ထင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
Download: Video to Mp3 Converter for Android
မှတ်ချက် ။ ။ ကူးယူမျှဝေမည်ဆိုပါက ကျွန်တော့် Blog ကို Credit ပြန်ပေးပါရန်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ။
Posted by Thurainlin at 07:38
Labels: Converter, Mp3, Software